Akhriso:-20-Xildhibaan oo Soomaliya Lagu Dilay Afartii Sano uu Xilka Hayay Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Akhriso:-20-Xildhibaan oo Soomaliya Lagu Dilay Afartii Sano uu Xilka Hayay Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud
Ku dhowaaad 20-xildhibaan oo ka Tirsanaa Baarlamaanka Federaalka Soomaliya ayaa Soomaliya lagu dilay afartii Sano uu dowladda waqtigeeda uu dhamaaday uu hogaaminayay Mudane Xasan Shiikh Maxamuud.
Xildhibaanada ayaa lagu dilay Siyaabooyin kala duwan ha u badnaadaan weeraro ay dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab ay ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen,kuwa lagu dilay shirqool lasoo maleegay.
22-kii September sanadkii 2012-kii Xildhibaan Xaaji Mustafa Maxamed Cabdullahi, oo kamid ahaa Baarlamanka Federaalka Soomaliya ayaa lagu dilay Mid kamid ah Xaafadaha Degmada Waabari ee Gobolka Banaadir waxaa dilkiisa sheegtay dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab.
6-dii December sanadkii 2013-kii Xildhibaan Maxamed Warsamed Maxamed oo kamid ahaa Baarlamanka Soomaliya ayaa lagu dilay qarax loogu xiray gaarigiisa xili uu marayay afafka hore ee xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, mas’uuliyada dilkaas waxaa sheegtay Al-shabaab.
22-kii Bishii December sanadkii 2013-kii rag bastoolado ku hubeysnaa ayaa toogasho ku dilay xildhibaan Xuseen abdisalaam oo kamid ahaa Baarlamanka Soomaliya xili uu ku sugnaa gudaha xaafada buul-xubey ee degmada Wadajir.
21kii, April sanadkii 2014-kii qarax loogu xiray gaarigiisa ayaa lagu qaarijiyay Allaha u naxariistee Marxuum Isaaq Maxamed Cali (Riino) oo kamid ahaa Baarlamanka Federaalka Soomaliya.
22-kii bishii April sanadkii 2014-kii kooxo ku hubeysna Bastoolada ayaa toogasho ku dilay Ala Ha u Naxariistee Xildhibaan abdiazis isaaq Mursal oo kamid ahaa Baarlamanka Federaalka Soomaliya.
23-july sanadkii 2014-kii rag hubeysan ayaa ayaa dilay Ala Ha U Naxariistee Xildhibaanad saacado Cali Warsame oo xiligaas soo dhameesatay waajibaadkeeda shaqo xildhibano, waxaa rasaas ku furey rag hubeysan oo watay baabuur kuwa raaxadda ah, maalmo kadib waxaa sheegtay Al-shabaab, dowladda Soomaliya ayaa bil kadib gacanta kusoo dhigtay ninkii ka dambeeyay dilka.
1dii bishii August sanadkii 2014-kii rag bastoolado ku hubeysnaa ayaa gudaha degmada Xamar weyne ku dilay Ex Xildhibaan aadan Madeer oo ahaa oo ahaa madaxa guddiga maaliyadda baarlamaanka Somalia, dilka waxaa sheegtay Al-shabaab.
9-kii Bishii February sanadkii 2015-kii rag hubeysana aya rasaas ku furey gaari uu watay Ala Ha U Naxariistee Xildhiban Abduaalhi Qayaad Barre oo marayay meel ku dhow xarunta Madaxtooyadda Soomaliya,mas’uuliyada dilk waxaa sheegtay dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab.
20-kii bishii February sanadkii 2015-kii waxaa Magaalada Muqdisho lagu dilay Ala Ha u Naxariistee Xildhibaan Cumar Furdug oo kamid ahaa Xildhibaanada baarlamanka federaalka Soomaliya.
Isla 20-kii Bishii February sanadkii 2015-kii dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab ayaa weerar ismiidaamin ah ku qaaday Hoteelka Centeral Hotel waxaa halkaas mas’uuliyiintii lagu dilay kamid ahaa Xildhibaan Mohamed Duale Muse (Haji Coffee).
23-kii bishii May sanadkii 2015-kii Ciidamo ka Tirsan Kuwa Dowladda Soomaliya ayaa dilay Xildhibaan Yusuf Cabdi Dirir, iyo qaar kamid ah ilaaladiisa oo marayay Degmada Xamar weyne ee Gobolada Banaadir,wasaaradda Amniga Gudaha Soomaliya ayaa xaqiijisay in falkaas ay geysteen Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaliya.
25-kii Bishii July Sanadkii 2015-kii kooxo Hubeysan ayaa degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ku dilay Ala ha u Naxariistee C/llaahi Xuseen Maxamuud Muuse Bantu oo ka mid ahaa Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Somalia.
Isla 25-kii bishii July sanadkii 2015-kii waxaa Isgoyska Korontada ee Degmada Wadajir lagu dilay Ala ha u naxariistee Xildhibaan C/laahi Xuseen Maxamuud, kadib markii gaarigiisa walxaha qarxa loogu xiray.
1-bishii November sanadkii 2015-kii Ala ha u naxariisteen waxaa waxaa la dilay Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo kamid ahaa mas’uuliyiin ku sugnaa Hoteelka Saxafi oo Al-shabaab ay weerar ku qaaday galab cad.
7-dii Bishii November sanadkii 2015-kii rag hubeysan ayaa degmada Xamar weyne ee Gobolka banaadir ku dhaawacay Maxamed axmed Gurxan, oo 24-saac kadib ku geeriyooday sbitaalka Daaru-shifa ee Magaalada Muqdisho.
1-dii bishii june sanadkii 2016-kii dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ayaa weerar qasaaro badan dhaliyay ku qaaday Hoteelka Ambaasadoor ee magaalada Muqdisho, waxaa mas’uliyiintii halkaas lagu dilay kamid ahaa Ex Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac Kaba-weyne.
Isla maalintaas waxaa la xaqiijiyay in weerarka lagu dilay Xildhibaan kale oo lagu magacaabi jirey maxamed Maxamuud Guurre oo kamid ahaa Xildhibaanada Baarlamanka Federaalka Soomaliya.
25-kii bishii June Sanadkii 2016-kii dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday Hoteelka Naasahablood ee magaalada Muqdisho, labo kadib waxaa gudaha hoteelka laga soo saaray Meydka wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisal wasaaraha Burci Maxamed Xamze.